OIL & သဘာဝဓာတ်ငွေ့ - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
ဆီ & ဓါတျငှေ့
Lex Artifex LLP'' s ကိုရှေ့နေများကရေနံအပေါ်အကြံပေးအဖွဲ့များကို & ညာပိုင်းထိခိုက်အရောင်းအဝယ်နှင့်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖုံးအုပ်ဓာတ်ငွေ့ကိစ္စရပ်များ, midstream နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းကဏ္ဍများနှင့်ရေနံတလွှား & ဓာတ်ငွေ့တန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်. ကျနော်တို့ရေနံအပေါ်ကိုယ်စားပြုမှုသည် & ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းပါဝင်သောဓာတ်ငွေ့နှင့်ပတ်သက်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ, လည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်များကို, ငှားရမ်းခွင့်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့ရပျကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်ဥပဒေရေးရာလိုက်နာမှုအတွက်အကူအညီပေးရန်.
ကျနော်တို့ဆီတအကွာအဝေးပေါ်အလုပ်လုပ် & စပ်လျဉ်းဓာတ်ငွေ့နှင့်ပတ်သက်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ:
ထုတ်လုပ်မှုခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်များ, ပိုက်လိုင်းများသဘောတူညီချက်, ingress / Egress အစီအစဉ်များ, ရေကြောင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ, အာမခံငွေအေးဂျင့်သဘောတူညီချက်များ, အကူးအပြောင်းသဘောတူညီချက်များ, လည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်များကို, စသည်တို့ကို;
ပါမစ်နှင့်လိုင်စင်ထုတ်ယူခြင်း, ရေနံ Prospect လိုင်စင်အပါအဝင်, ရေနံသတ္တုတွင်းစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များ;
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာသက်ဆိုင်သောနိုင်ဂျီးရီးယားဥပဒေပြဌာန်းအပေါ်ဥပဒေရေးရာအကြံပေးအဖွဲ့, ပတ်ဝန်းကျင်, အခွန်ကောက်ခြင်း, အလုပ်, စသည်တို့ကို.
JVs, project financing, M က&အဖြစ်, ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ္ဍာရေး, ကုန်ပစ္စည်းအရောင်း, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်စင် & လွှဲပြောင်း, litigation, ကုန်သွယ်, စီမံကိန်းကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, စသည်တို့ကို.
အကြံပေးအဖွဲ့များအတွက်, တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် lexartifexllp@lexartifexllp.com.